More on Portable Web Servers | mmshare
1. Server2Go Portable Web Server
Server2Go Portable Web Server ကို အခမဲ့ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပြီး ၄င်းတွင် Apache, MySQL, SQLite, Perl နှင့် PHP တို့ ပါရှိသည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် အသုံးပြု ဖန်တီးထားသည့် Web application များကို - USB Drive, CD Rom သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ folder တစ်ခုခုမှ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားသော Web design, Web site များနှင့် အခြားသော Web Application များကို သွားလေရာသို့ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး၊ အရေးကြီးသည့် အလုပ်ရှင်များ (လုပ်ငန်းအပ်နှံထားသူများ)၊ အတန်းဖော်များနှင့် ဆရာ/ဆရာမများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို - အလွယ်တကူ ရှင်းလင်း ပြသနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
2. Uniform Server
Uniform Server မှာ Windows Apache MySQL PHP (WAMP) ကို အိပ်ဆောင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အိပ်ဆောင် မှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်း (Portable Memory Device) တစ်ခုမှတစ်ဆင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို Windows ကွန်ပျူတာများတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်စေသည်။ Apache, PHP, MySQL နှင့် Perl တို့ ပါရှိသည်။
XAMPP တွင်လည်း Apache, MySQL, PHP နှင့် Perl တို့ ပါဝင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးထားသည့် Wensite များ၊ Blog များ၊ CMS များ၊ ကိုယ်တိုင် ရေးသားထားသည့် PHP Script များနှင့် MySQL database များကို Memory stick များတွင် ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ XAMPP ကို Memory stick တွင် ထည့်သွင်းလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Memory stick အတွင်း XAMPP အတွင် folder တစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။
http://sourceforge.net/projects/xampp/files/ မှ အသုံးပြုလိုသည့် XAMPP ဆော့ဖ်ဝဲ zip, tar.gz ဖိုင်ကိုရယူပါ။
ရလာသည့် XAMPP - zip, tar.gz ဖိုင် အတွင်းမှ ဖိုင်များကို အဆင့် (၁) တွင် ဖန်တီးခဲ့သည့် folder အတွင်းသို့ ဖြန့်ထည့်ပါ။
လိုအပ်သည့် အပြင်အဆင် (Configuration) များဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် setup_xampp.bat ဖိုင်ကို ရှာပြီး Double click လုပ်ပါ။
xampp-control.exe ကို Double click လုပ်ပြီး ပွင့်လာသည့် Control Panel မှတဆင့် web application များကို စတင်ဖန်တီးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
4. USB Webserver
USB Webserver သည်လည်း XAMPP, NetServer နှင့် အခြားသော ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် Web Server များကဲ့သို့ပင် ကွန်ပျူတာ၏ System Tray ထဲတွင် ထားရှိ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ USB Drive တစ်ခုမှတစ်ဆင့် Portable ဆော့ဖ်ဝဲအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်သလို၊ System service တစ်ခုအဖြစ်လည်း အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ Apache, MySQL, PHP နှင့် PHPMyAdmin တို့ ပါရှိသည်။
Menu များကို English ဘာသာစကားအဖြစ် မြင်တွေ့လိုပါက Settings tab မှတဆင့် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Portable ဆော့ဖ်ဝဲအဖြစ် အပြည့်အစုံ ထည့်သွင်းပါက USB Drive တွင် 22.3MB နေရာယူမည် ဖြစ်သည်။